Yan Aung: Crouching Tiger... Hidden Blogger ;)
Crouching Tiger... Hidden Blogger ;)
ကျွန်တော်ဒီနေ့ပဲ အခန်းပြောင်းလို့ပြီးတယ်ဗျ. သိတယ်မဟုတ်လား. အခန်းပြောင်းတယ်ဆိုတာက အလုပ်တော့ အများသားလေ.
ဒီတိုင်းနေနေတော့သာ ဘာမှမသိသာတယ်. ပြောင်းမယ်ဟဲ့ဆိုပြီး သိမ်းဟဆည်းဟဆိုတော့မှ အားလားလား.. ထွက်လာလိုက်တဲ့ အထုပ်တွေ ဗုံလို့စီနေတော့တာပဲ...
ပြီးလည်းပြီးရော အလယ်ခေါင်မှာတစ်ယောက်တည်းထိုင်နေရင်း စိန်ဗေဒါလို့ တစ်ထုပ်ချင်းကို တီးထည့်လိုက်ချင်စိတ်သာ ပေါက်တော့တယ်. မောတယ်ဗျာ.
တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း "ဩော်... ငါ့ဘ၀ရယ်လေ.. ဘယ်တော့များမှ အတည်တကျဖြစ်လိမ့်မလဲရယ်လို့လေ..."
အင်း... ဒီနှစ်သီတင်းကျွတ်တော့ မီးပုံးထွန်းရချည်သေးရဲ့. ဟတ်ဟတ်.
(ဆောရီးပါ မရယ်... ကျွန်တော့်ကို ဟတ်ဟတ်လို့ မရယ်နဲ့ပြောပေမယ့်လည်း ကျွန်တော်ရယ်ပါရစေနော်... မဟုတ်ရင် ကျွန်တော့်ဘ၀အမောတွေနဲ့ စိတ်မောလူမောဖြစ်လွန်းလို့ပါ. ခွင့်လွှတ်နော်.. မ..)
(ဒေါင်းတယ်ဆိုလို့ တစ်အိမ်ဝင်ဆွဲမယ် လုပ်မနေနဲ့ဦး.. ပိုကာဒေါင်းတာမဟုတ်. လူဒေါင်းတာ...)
သိတော့သိနေတယ်. ငါ့ဘလော့ဂ်လည်း အိစိဂွစိဖြစ်နေပြီလို့. ပျင်းပျင်းနဲ့ youtube ပဲ ထိုင်ကြည့်လိုက်၊ သီချင်းလေးတွေ နားထောင်လိုက်. အဲဒီ့ထဲကမှ ကြိုက်တဲ့သီချင်းလေးတွေတွေ့ရင် ကောက်တင်လိုက်နဲ့ပဲ... တစ်ခါတစ်လေကျတော့လည်း ဆားချက်ရမှာ ပျင်းလွန်းလို့ကို ဆားကိုမချက်ချင်တော့တာ. ဒီတိုင်းပဲ ပစ်ထားလိုက်တော့တယ်ဗျာ.
Blog+Depression = Blogression (Coined by Yan Aung and patented to EOT Int'l Ltd.) :)
ဘာပို့စ်မှလည်း ထွက်မလာဘူး. လူကလည်း လေနေတယ်. အလုပ်ကနေအိမ်ပြန်ရောက်ရင် သီချင်းနားထောင်မယ်၊ စားမယ်၊ ၀ါးမယ်. စာနည်းနည်းပါးပါးဖတ်မယ်. သတင်းတစ်ချို့လိုက်ဖတ်မယ်. စိတ်ဝင်စားတဲ့ ဘလော့ဂ်တစ်ချို့ လိုက်ကြည့်မယ်. စိတ်နည်းနည်းပါရင် ဂစ်တာလေး ဒေါင်ဒင်လုပ်မယ်. အိမ်က အစ်မတို့၊ အမေတို့လာရင် ဂျီတော့ခ်မယ်. မ နဲ့တွေ့ရင်.. အဟင်း. အဟွတ်. (ချောင်းဆိုးလိုက်တာ. အိတ်စ်ကွတ်မီ...)း)
ကျွန်တော့်မှာ ပါဆင်နယ်လတီအမျိုးမျိုး ရှိတယ်လို့ ပြောရမလားပဲဗျ.
ကျွန်တော် တက်ကြွတဲ့အခါများကျရင် ကြက်ဖကတောင် အဖေခေါ်ရမလားပဲ...
(ရက်ပ်ပါကြက်ဖမဟုတ်.ဟတ်ဟတ်)တကယ်. လူကအလိုလိုနေရင်းကို မြောက်နေတာ.
အဲ. ကျွန်တော်မှိုင်ပြီဆိုပြန်ရင်လည်း လင်းတကတောင် အဘရေလို့ ခေါ်ရလောက်တယ်. ဘာမှကို မလုပ်ချင်တော့ဘူး.
(ဟိုတလောကဆို လင်းတတောင် အဘလို့ခေါ်ရတာ မောလို့ အသံသိပ်မထွက်ရှာတော့ဘူး. အပ.. အပ လုပ်နေတာနဲ့ ကျွန်တော်တောင် လန့်ခုန်မိသေးတယ်. ဘယ်က အပမှီတာလဲဆိုပြီးတော့လေ. ဟတ်ဟတ်)
အဓိကက ကျွန်တော့်ကို ဟတ်ဟတ်လို့ မရယ်ဖို့၊ ကိုယ့်အသက်လည်း ကိုယ်ပြန်ကြည့်ဦး. တည်တည်တံ့တံ့နေလို့ ပြောတဲ့ မ ပေါ့.
ကျွန်တော်က ဟတ်ဟတ်လို့သာ ရယ်တာ. ရယ်စရာတွေသာ ရေးတာ. ပေါတောတောတော့ မနေမိပါဘူးနော်. ဟုတ်တယ်ဟုတ်.
ကျွန်တော့်ကို အဲလိုလည်း အမိန့်ချလိုက်ရော ကျွန်တော့်မှာ ရေးထားတဲ့ပို့စ်တွေထဲက ဟတ်ဟတ်တွေကိုလိုက်ဖျက်၊ ရယ်စရာတွေများပါနေမလား၊ ပေါများပေါနေမိပြီလားဆိုပြီး ဆင်ဆာလိုက်ဖျက်နဲ့ နောက်ဆုံးတော့ ပို့စ်တစ်ခုလုံးလည်း သိုးမွေးစက်ရုံထဲကထွက်လာတဲ့ အမွှေးရိတ်ပြီးသားသိုးလို ငုပ်စိလေးပဲ ကျန်တော့တယ်. (အဟတ်ဟတ်.)
အဲဒါနဲ့ စိတ်ပျက်ပြီး ဘာမှကို မတင်တော့ဘူးဗျာ. အေးရော..
တစ်ခါတစ်လေ ရေးချင်ပါရဲ့. လူကပင်ပန်းနေပြန်ရော. အဲဒီ့အခါကျတော့လည်း အိပ်ရာထဲမှာဝင်ခွေရင်း ဟက်ဒ်ဖုန်းလေး နားမှာတပ်လို့ ကမ္ဘာလောကကြီးနဲ့ ခေတ္တအဆက်အသွယ်ဖြတ်နေလိုက်တယ်.
ကျွန်တော် ဂျီတော့ခ်မ၀င်တာကြာပြီဗျ. ကျွန်တော့်ကို မတွေ့တာကြာလို့ 'ငါ့ကိုများ ဘန်းထားလေလား' မထင်ကြပါနဲ့နော်. တကယ်ပါ. ကျွန်တော်မလာဖြစ်တာပါ. အဲလိုဘလော့တတ်တဲ့ အကျင့်လည်း မရှိပါဘူး. စိတ်ကုန်ပြီဆိုရင် အဲဒီ့လိုလူစားမျိုးကို ကျွန်တော့်ဘ၀ကြီးထဲက တစ်ခါတည်းကို ထုတ်ပစ်လိုက်တာ. ဘလော့တဲ့အဆင့်လောက်နဲ့ မကျေနပ်တတ်ဘူး. ဟတ်ဟတ်ဟတ်
ကျွန်တော် စာတွေပြန်ရေးဖြစ်ပါဦးမယ်. အကန့်အသတ်နဲ့ရေးဖြစ်ပါမယ်. ဇွန်လောက်ကျရင် ကျွန်တော်စာမေးပွဲတစ်ခုဖြေဖို့ ရှိနေတယ်ဗျ. လောလောဆယ်တော့ အလုပ်ကို လျှော့လုပ်ရင်းနဲ့ပဲ စာဖတ်သွားမလား. ဒါမှမဟုတ် အလုပ်ကို ထွက်ပြီး စာမှစာ တစာစာထိုင်အော်ရင်ပဲ ကောင်းမလားချိန်နေတယ်. ဘဏ်အကောင့်ကို ကြည့်လိုက်တိုင်း လူကချွေးစေးတွေပြန်ပြန်လာတယ်.း)
ဒီမှာ စီးပွားရေးတွေကလည်း ကျလို့ အလုပ်တွေဖြုတ်နေချိန်မှာ ကိုယ်က အဆန်းထွင်ပြီး အလုပ်ထွက်တာ ကောင်းပါ့မလားဆိုပြီး တော်၏လျော်၏ ချိန်နေရသေးတယ်. အင်း... နောက်ဆုံးတော့လည်း ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာ လုပ်တာပဲလေလို့ ဖြည့်တွေးတွေးပေးလိုက်တယ်. သူ့ဖာသာ Depression မကလို့ Inflation ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့. ဟုတ်ဘူးလား.
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ. ကျွန်တော် ခင်ဗျားတို့ကို ချစ်ပါတယ်. အဲဒီ့တော့ကာ ကျွန်တော်တတ်သလောက် မှတ်သလောက်လေး တွေကိုတော့ ဒီဘလော့ဂ်လေးမှာ ဆက်တင်ဖြစ်နေပါဦးမယ်. ကျွန်တော်မြောက်ကြွကြွမနေတတ်သလို ကုပ်ချောင်းချောင်းလည်း မနေတတ်ပါဘူး. ဒါကြောင့် ကျွန်တော့်ကို အမြင်ကတ်နေသူများလည်း ဆက်ကတ်နိုင်သလို ခင်တွယ်သူများလည်း ဆက်ခင်နိုင်ပါတယ်. ဂလု... (မောလို့ ရေသောက်တာ.း) )
အခု ကျွန်တော့်စိတ်ကြိုက်အခန်းတစ်ခုကို ပြောင်းပြီးပြီ. ဘုရားစင်တွေပါ သေသေချာချာ ရိုက်လိုက်တယ်ဗျ. အရာအားလုံးဟာ လန်းဆန်းနေတယ်. ကျွန်တော့်မနက်ဖြန်တွေအတွက် ကျွန်တော် ဒီနေ့ ရိုင်းမြစ်ထဲမှာ ရေဆင်းချိုးခဲ့တယ်... (အဲလေ. ရေးရင်းနဲ့ ကဗျာဆန်လာပြီ. ရပ်ဦးမှ.း) )
ကဲ.. အားလုံးပဲ ကောင်းသောည/ကောင်းသောနေ့လေးများ ဖြစ်ကြပါစေဗျာ.
Plus, ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာ ဘလော့ဂင်းနိုင်ကြပါစေလို့လည်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်.
အိမ်အသစ်ကလေးနဲ့ နေ့သစ်တွေမှာ ပျော်နိုင်ပါစေနော်...
စာတွေရလို့ သွားတွေကျိုး.. အယ့်
စာတွေရ အိမ်လေးလည်းလှ၍ မ.. ကိုလည်း
ဆက်... မ နိုင်.... တ နိုင် ပါစေနော်...
အိမ်သစ်လေးကနေ စိတ်ကူးသစ်တွေနဲ့ ပိုစ့်အသစ်တွေ ကို ရေးနိုင်ဖွဲ့နိုင် ပါစေဗျာ..။
ကိုရန်... အိမ်ခဏခဏ ပြောင်းတယ်နော်... အိမ်ပြောင်းရတာ အတော်ပင်ပန်းမှာပဲ...။
ကိုရန် ရေးတဲ့စာတွေက ဟတ်ဟတ်တွေပါလို့ဖတ်ရင်းနဲ့ခဏခဏပြုံးမိတယ်... ။ ပေါတောတော မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ ... မ ... ကို ကူပြောပေးရမလားဟင်..။
>ကိုရင်နော် ခင်လေးငယ်... သွားကျိုးလည်း အားကိုးမှာပဲတဲ့ဗျ. အဟတ်ဟတ်.
>မသက်ဇင်... မအကြောင်းက အခန်းပြောင်းမှ ရေးရမှာလားဗျ. ဖော်အဲဗား မ ပါဗျာ.း)
>မမနော်ဟရီ. မ တပ်လိုက်တော့ မမ ဖြစ်သွားရောဗျာ.း) လန်းသွားတယ်ဆိုလို့ ၀မ်းသာပါတယ်. ကျွန်တော်ခုတော့ မဒေါင်းတစ်ချက် ဒေါင်းတစ်ချက်ပဲဗျ. ဟတ်ဟတ်.
>လေးမ... ပြောပေးပါဗျာ. ပလိစ်...း)
မြန်မြန်ဒေါင်းအောင် ဂျိုကာ ပစ်ပေးလိုက်တယ်
မ မမ မြန်မြန်မ
မမ မ မ မိမိ မမယ်
မိမိ မီးမီး မို့မို့ မောင်မောင်
မယ်မယ် မိုက်မှား မင်းမင်းမယ် မှိုင်
မယူလိုက်က မိုက်လို့ထင်... ယူလိုက်ပြန်က ကြိုက်လို့ထ...